Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. फिल्म चलाउन गीत – Emountain TV
काठमाडौँ, २१ साउन । व्यावसायिक फिल्म उद्योगको अग्रणी मानिने हलिउडले नाचगनलाई खासै स्थान दिँदैन । राम्रा अवार्ड जितेका अधिकांश फिल्ममा नाचगानै हुन्न । दक्षिण एसियाली फिल्ममा भने नाचगानकै हालीमुहाली हुने गरेको छ ।
विशेषत प्रेमकथामा फिल्म बनाउन दक्खल राख्ने थापा निर्देशित ‘प्रेमगीत’ र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ का गीतहरू फिल्मको रिलिजअगावै हिट भएका थिए । गीतलाई प्राथमिकतामा राखेर फिल्म चलाउन खप्पिस मानिन्छन्, निर्देशक विकास आचार्य । ‘नाइँ नभन्नू ल’ का सिरिज चल्नुको मुख्य कारण नै गीतसंगीत रहेको उनको बुझाइ छ ।
त्यसैले पनि उनी प्रिप्रोडक्सनदेखि नै गीतका तीनै विधा लेखन, संगीत र गायनलाई मिहिन रूपमा हेर्छन् र छायांकन पनि त्यसै गरी गर्छन् । उनी गीतबिनाको फिल्मको कल्पना नै गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘छक्का पञ्जा’ जति चल्यो, त्यसअघि नै त्यसको गीत ‘सुर्के थैली खै’ निकै हिट भयो । यो गीतले युटयुबमा पहिलो पटक करोड भ्युजको रेकर्ड राख्नेदेखि कैयौं दर्शकलाई ‘छक्का पञ्जा’ हेर्न हलसम्म तानिदियो । फिल्मकी निर्देशक दीपाश्री निरौला त्यसैले पनि गीतलाई फिल्म प्रमोसनको पहिलो हतियार मान्छिन् ।
‘अचेल फिल्ममा गीत भनेको संवादबिनाको ट्रेलरै जस्तो भएको छ फिल्म चिनाउनको लागि,’ उनले भनिन्, ‘गीतसंगीतबिना फिल्मको त्यति औचित्य हुँदैन जस्तो लाग्छ ।’ हाम्रो संस्कृति र रहनसहनका कारण पनि हलिउडले जस्तो बिनानाचगान फिल्म बनाउन नसकिने उनी बताउँछिन् ।
‘एक समय नेपाली फिल्ममै पनि गीत नराखी फिल्म बनाउने चलन देखिन थालेको थियो । जब ‘सुर्के थैली खै’ आयो, त्यसपछि अहिले फेरि फिल्ममा लोकशैलीको गीतको बाढी नै आयो,’ दीपाश्रीले दाबी गरिन् ।
गीतबिनाका फिल्मले पाएको सफलता पनि उत्तिकै लोभलाग्दो छ । आफ्नो पहिलो निर्देशन ‘जात्रा’ मा प्रदीप भट्टराईले न पात्रलाई डाँडाकाँडामा लगेर नचाए, न त गीतै राखे । तैपनि फिल्म निकै चल्यो । तर दोस्रो फिल्म ‘शत्रु गते’ मा भने उनले गीतको प्रयोग मात्रै गरेनन्, ‘रूपै मोहनी’ गीतले नै फिल्मको व्यापारमा निकै सघायो ।
‘विषयवस्तुले गीत माग्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर बजारका लागि मुख्य हतियार भने रहेछ यो । गीतकै कारण दर्शकहरू हलसम्म तानिन्छन्,’ भट्टराईले स्विकारे, ‘ट्रेलर बजाउन पैसा लाग्छ, तर गीत जसले पनि निशुल्क बजाइदिन्छन् । प्रमोसन हुन्छ । केही दर्शक गीत नभएको फिल्म हेर्नै नजाने खालका पनि रहेछन्, कथा जतिसुकै राम्रो किन नहोस् । गीत हिट भयो भने त्यसैका आधारमा बरु फिल्म हेर्न जान्छन् ।’ तर पनि उनी फिल्ममा गीतलाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठान्दैनन् ।
अर्की निर्देशक निरौला पात्रहरूबीचको भावनात्मक कुरा निकाल्न पनि गीतजत्तिको सहज माध्यम अरू नभएको उल्लेख गदै पूर्ण मनोरञ्जक फिल्मका लागि पनि गीत अपरिहार्य रहेको ठान्छिन् । ‘म त गीतबिनाको फिल्म सोच्न पनि सक्दिनँ,’ उनले भनिन् । कान्तिपुरबाट
सोमबार, २१ साउन २०७५